चीनमा नेपाली नेतालाई रातो कार्पेट तर नेपाली उत्पादनलाई भने फलामे ढोका ! « Nepal Bahas
नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा डरलाग्दो गिरावट :- आयातमा २२ प्रतिशतको बृद्धि, निर्यातमा २८ प्रतिशतको ह्रास
प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०७६, बिहीबार १४:०९
काठमाडौं । मित्र राष्ट्र चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार र नेपालमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । दुवैका आस्था र विश्वासका केन्द्र माक्र्स, लेनिन र माओ नै हुन । हसिँया -हतौडा अंकित झण्डाप्रति दुवैतर्फ ठूलो श्रद्धा छ ।
पछिल्लो समय चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको चीन भ्रमण पानी–पँधेरो जस्तै हुने गरेको छ । चीनले ज्वाई र भाञ्जालाई जस्तो साड्षोपचारले स्वागत सत्कार गर्दै चीनका विभिन्न शहर घुमाउने कार्यले हालैका दिनमा झन् तीव्रता पाएको छ ।
तर नेपालको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले भने स्थिति ठीक उल्टो देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको नेपालको वैदेशिक व्यापारको पहिलो आठ महिनाको तथ्यांकमा अघिल्लो आठ वर्षको तुलनामा नेपालको चीनतर्फको निर्यात व्यापारमा करिब २८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । अगरबत्ती, पश्मिना, चाँदीका गरगहना, छाला, मैदा, चिया र ऊनी गलैंचाको निर्यातमा भारी गिरावट आएपछि चीनतर्फको नेपालको समग्र निर्यात ओह्रालो लागेको हो ।
उता चीनबाट हुने आयातमा भने समीक्षा अवधिमा करिब २२ प्रतिशतको बृद्धि भएको छ । चीनबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरु मध्ये अधिकांश वस्तुहरुमा भएको वृद्धिले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । परिणामस्वरुप गत आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा नेपालमा चीनबाट भएको आयात एक खर्ब रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा सो आयात रु. एक खर्ब ३९ अर्ब पुगेको छ ।
चीनले दिने अतिथि सत्कारमा मख्ख पर्दै मुलुकको निर्यात व्यापार अभिवृद्धि गर्ने विषयमा चीनसँग वार्ता नै गर्न नसक्दा चीनमा नेपाली उत्पादनहरुलाई बजार प्रवेश सहज हुन सकिरहेको छैन । बैंकमार्फत भूक्तानीको व्यवस्था गर्न नेपालले अझैंसम्म चीनलाई सहमत तुल्याउन सकिरहेको छैन । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार हुँदा पनि चीनले आफ्नो बैंकको नेपालमा शाखा खोल्ने विषयमा उदाशिनता प्रदर्शन गर्दै आईरहेको छ ।
तीन हजार पैतीस नेपाली बस्तुहरुलाई चीनले नि:शुल्क भन्सार सुविधा प्रदान गरेतापनि गुणस्तरका प्रावधानहरु, क्वारेण्टाइनका व्यवधानहरु र भुक्तानी समस्याका कारण ती सुविधाहरु पनि नेपालले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । नेपालीहरुलाई चीनमा रातो कार्पेट ओछ्याउने भन्दा नेपालका उत्पादनहरुलाई चीनमा रातो कार्पेट ओछ्याउने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ भने नेपालमा कसैलाई पनि चासो छैन ।
नेपाल-चीन आयात-निर्यात व्यापारकाे तथ्यांक
#export in nepal
#import in nepal